Medina Sidonia | Akụkọ Njem
Maria | | Spain obodo, Getaways, General
Foto | Provgbè Cádiz
Ejikọtara ịma mma na ịhụnanya nke Cádiz n'otu ebe: Medina Sidonia, ebe na-agbagharị Sierra de Cádiz na Atlantic Ocean nke na-anabata ndị njem mgbe niile.
Ọdịbendị dị iche iche ahapụla akara ha na nnukwu ihe nketa akụkọ ihe mere eme nke Medina Sidonia, nke bụ otu n'ime obodo kacha ochie na Spain. Obi abụọ adịghị ya, otu n'ime ebe kachasị mma iji hụ na Andalusia.
1 Ihe ị ga-ahụ na Medina Sidonia
1.1 Ihe ncheta arches na mgbidi
1.2 Inalọ Medina Sidonia
1.3 Chọọchị Santa María la Mayor
1.4 Santiago ụka
1.5 Chọọchị Mmeri
1.6 Ogige Spain
1.7 Nolọ ihe nkiri Ethnographic
Ihe ị ga-ahụ na Medina Sidonia
Obodo a bụ otu n'ime oghere kachasị mkpa dị na mpaghara Iberian Peninsula, mpaghara mpaghara La Janda, n'ihi oke akụ na ụba ya. Agbanyeghị, etiti akụkọ ihe mere eme nke Medina Sidonia dịkwa oke mkpa ma bụrụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ. A nnukwu ohere aha ya Historic Artistic Site na Akụ nke ọdịbendị Omenala na 2001.
Ihe ncheta arches na mgbidi
Mgbidi Medina Sidonia sitere na oge Alakụba - oge Etiti Ala Ala. Ọ bụ ezie na ọ belatara ruo taa, anyị ka nwere ike ịtụgharị uche n'usoro ya, ụfọdụ ngalaba gbara n'etiti ụlọ na ndị ọzọ sara mbara karị, nke bụ ịgba akaebe maka ọnọdụ dị mkpa nke Medina Sidonia n'ime Cádiz.
Ebe kachasị ese foto na mgbidi ahụ bụ arches na ọnụ ụzọ mbata nke obodo: ọnụ ụzọ Betlehem, ọnụ ụzọ Shepherdess na ọnụ ụzọ Anyanwụ.
Ọnụ ụzọ ámá Betlehem bụ ebe a na-abanye obodo ochie. A na-akpọ ya n'ihi na niche ahụ nwere onyinyo nke Meri Nsọ nke Betlehem.
Ọnụ ụzọ Pastora nwere njiko ịnyịnya na nnukwu steepụ nwere nnweta. Ọ bụ ụzọ Arab nke nnweta nke ogige ahụ. A makwaara ya dị ka Puerta de la Salada n'ihi isi iyi na njedebe nke steepụ.
Puerta del Sol na-eche ihu n’ọwụwa anyanwụ, ya mere anwụ na-awa ebe a kwa ụtụtụ. Ọnọdụ zuru oke iji were foto mara mma nke njem gaa Medina Sidonia.
Inalọ Medina Sidonia
Foto | Emilio J. Rodríguez Posada Wikimedia Commons
Ọ bụ mkpọmkpọ ebe nke mgbidi ochie nke ndị Rom, ndị Alakụba na Ndị Kraịst ji dị n'elu ugwu Castle bụ nke naanị foduru fọdụrụ ebe ọ bụ na narị afọ nke iri na isii gara aga ka ejiri ya rụọ ebe arụ maka mgbidi ndị ọzọ dịka Halllọ Nzukọ Obodo ma ọ bụ ụlọ ụka bụ isi nke Santa María la Coronada.
Site na ọnọdụ ya, mita 300 dị elu karịa ọkwa mmiri, enwere echiche pụrụ iche banyere ndị na-ekpuchi. Ga ileta nnukwu ụlọ Medina Sidonia bụ ohere kachasị mma iji hụ obodo ahụ na ịma mma ya niile na gburugburu obodo mara mma. Ebe nrigo site na etiti obodo bu ihe anuri ma obu ebe ihe omumu banyere onwe ya ka emeghariri ka o ghari iso ebe ozo.
Chọọchị Santa María la Mayor
Closeka nke Santa María la Mayor la Coronada, ụlọ nsọ Gothic-Renaissance, jiri atụmatụ obe nke Latịn na ụgbọ mmiri atọ wuru na ụlọ alakụba ochie.
O nwere uzo ihu uzo Herrerian nwere mmetuta nke Andalusian Plateresque. Agbanyeghị, ime ahụ pere mpe n'ihi na n'ime ahụ bụ nnukwu ebe ịchụ aja Plateresque, ọfụma Epistle ma ọ bụ echiche, ihe osise nke Christ nke Mgbaghara site n'aka Pedro Roldán site na 1679, Onye jidere nke Corpus Christi site na 1575, na baroque na-ekwe ukwe na rococo ịchụàjà.
Ọ bụ ụka nke nwere akụkụ akụkụ ala akụkụ anọ, ụzọ atọ atọ na ụdị Mudejar nwere uko ụlọ mara mma nke malitere na mbido narị afọ nke XNUMX. A raara ya nye onye nchebe nke obodo na nke Spain: Santiago el Mayor.
Ma ndị nọn ma chọọchị dị ugbu a sitere na narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX. Ihe mejupụtara ụlọ ụka Victoria bụ nave atọ, blọk brik na nnukwu dome nke a chọrọ n’oge ya. N'ime ọtụtụ ọrụ nkà dị mkpa iji hụ, dị ka ihe osise abụọ nke Martínez Montañés na nnukwu ebe ịchụàjà na Virgen de la Victoria nke a na-ekwu na ụlọ akwụkwọ Pedro de Ribera.
Foto | Michael Gaylard Wikimedia Commons
Na Plaza de España, ụbọchị na-amalite n'isi ụtụtụ wee gwụ mgbe chi mechiri azụmaahịa ha. Ọ bụ etiti obodo ahụ na ebe nzukọ maka ndị bi na ya. N'ebe a, enwere ụlọ mmanya, ụlọ oriri na ọ whereụ restaurantsụ na mbara ala ebe ị nwere ike ị aụ ihe ọ drinkụ drinkụ mgbe ị gachara ogologo njem site na Medina Sidonia ma nụ ụtọ ndụ dị nwayọ na ọnọdụ ndị maara nke ndị bi ebe ahụ.
Na mgbakwunye, na Plaza de España bụ Halllọ Nzukọ Obodo. Barolọ a na-ewu ewu nke baroque nke na-edebe Obodo Obodo Ọchịchị.
Nolọ ihe nkiri Ethnographic
Nolọ ihe nkiri Ethnographic nke Medina Sidonia na-eleghachi anya n'oge maka omenala na ibi ndụ ndị Assisi site na ihe ngosi zuru oke ebe ị nwere ike ịhụ site na ngwongwo ụlọ, ngwá ọrụ maka ịrụ ọrụ n'ọhịa na nka na nchịkọta nke arịa ụlọ ochie.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Medina Sidonia